ArcGIS - Akwụkwọ Onyonyo - Geofumadas
June, 2017 ArcGIS-ESRI, Akụziri CAD / GIS, Apụta, Geospatial - GIS
Nke a bụ akwụkwọ bara ọgaranya dị na Spanish, yana ọdịnaya dị oke ọnụ, ma akụkọ ihe mere eme na teknụzụ, gbasara njikwa ihe onyonyo na ọzụzụ metụtara sayensị ụwa na sistemụ ozi ala. ọtụtụ ọdịnaya nwere hyperlinks na ibe ebe enwere ọdịnaya mmekọrịta.
Ebumnuche nke akwụkwọ a bụ igosi ndị ọkachamara GIS, ndị mmepe ngwa, ndị na-emepụta weebụ, ma ọ bụ ụdị ụdị ọ bụla nke teknụzụ otu esi aghọ ihe onyonyo na GIS ace. Ma ọ bụ, tinye ụzọ ọzọ, otu esi esi bụrụ onye nwere ọgụgụ isi, nwee ọgụgụ isi, ma na-arụ ọrụ nke ọma karịa data ihe oyiyi na GIS. Na mberede, onyonyo adịla ezigbo mkpa na ndị maara etu esi achọ ha, nyochaa ha ma ghọta ihe ha pụtara n'ezie ga-abụ ndị ọkachamara na-achọsi ike maka afọ ndị na-abịa.
Enwere ọtụtụ ndị ga - ege ntị maka akwụkwọ a. Nke mbu bu ndi GIS ndi okacha amara na ndi mmadu, ndi mmadu na-aru oru na eserese na ihe omimi nke ubochi kwa ubochi, karisia ndi choro inweta ihe kari na ihe omuma ha. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkà mmụta sayensị data, onye na-ese foto, onye ọrụ ụlọ ọrụ gọọmentị, onye na-eme atụmatụ ime obodo, ma ọ bụ ndị ọrụ GIS ndị ọzọ, ị nwere ike iji Web na-enye ndị mmadụ ozi obodo.
Eleghị anya ị ga-amataworị ọdịdị dị mkpa nke onyonyo dị ka teknụzụ weghaara data na-ejikọ nke ọma na data vector data.
Ndị ọzọ na-ege ntị bụ ndị ọrụ GIS ọhụrụ chọrọ ịchọpụta ihe enwere ike ime na onyonyo: ndị mmadụ dị ka ndị na-anya ụgbọ elu hobbyist na-arụ ọrụ ụgbọ elu iji depụta ogige ụlọ akwụkwọ, ndị na-eme atụmatụ ime obodo na-eme atụmatụ mmezigharị ọrụ, ma ọ bụ ndị sayensị na ndị na-ede blọgụ. akụkọ ahụ banyere mgbanwe ihu igwe wee bịa GIS n'ihi mmasị ha nwere n'ihe onyonyo.
N'ikpeazụ, akwụkwọ a ga-atọ ụtọ maka ndị na-enwe ọ enjoyụ na ịgagharị ụwa na ịhụ ihe oyiyi na-adọrọ adọrọ nke ụwa. Maka ndị okike ala ndị a "oche agha" na ndị ọzọ, akwụkwọ a na ụdị eletrọniki ya, dị na TheArcGISImageryBook.com, na-enye ọtụtụ ihe dị iche iche na-emetụta ma na ụfọdụ ọnọdụ na-enye nsogbu, yana njikọ nke onyonyo dị ike na maapụ web ngwa nke ha na-akọ akụkọ na-atọ ụtọ gbasara ụwa anyị a. Nanị ihe achọrọ iji nwee ọ enjoyụ n'ime akwụkwọ a bụ ịchọ ịmatakwu ụwa nke ọma site na onyonyo na ihe osise eserese na inwe mmụọ dị mma ịrụ ọrụ.
Mụta site na ime
Akwụkwọ a, na mgbakwunye na ịgụ ya, nwere akụkụ bara uru nke naanị kọmputa kọmputa chọrọ
nwere nnweta web. Ihe njem ahụ malitere mgbe mmadụ tinyere aka na usoro ahụ site na ịmepe njikọ,
ịgagharị map na ngwa ndị ọrụ ndị ọzọ mepụtara, ma mezue ihe mmụta iji mepụta gị
nwere map na ngwa. Ihe ndi a (karia ihe kariri 200, ngwa, vidiyo na onyonyo)
ha nwere hyperlinks na TheArcGISImageryBook.com.
Akwụkwọ a gbasara itinye ihe osise na ArcGIS, weebụsaịtị GIS, ma ọ bụ nke abụọ na
Big Idea aha usoro. Ọ bụrụ na ị na-amalite na GIS, ọ nwere ike inyere aka ịgụ akwụkwọ mbụ n'usoro ahụ, Akwụkwọ ArcGIS: 10 Nnukwu echiche maka itinye Geography na World gburugburu anyị. Ọ bụ ezie na e mere mpịakọta a dị ka ọrụ naanị ya, ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ga-ahụkwa na akwụkwọ mbụ ahụ masịrị ya.
Previous Post«Previous Kedu ka nchịkwa ala ga-adị n'ọdịnihu? - ọhụụ nke Cadastre 2034
Next Post Tụlee mgbanwe ahụ mere ka a CAD fileNext »